အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (What/Tell/Thanks/Wait/Bother) - Myanmar Network
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (What/Tell/Thanks/Wait/Bother)
Posted by Language Republic on July 4, 2012 at 9:20 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
so what? (အဲ့ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ)
You use so what? asarude reply when you think what has just been said is not important, relevant or interesting, especially when you think that you are being criticized in some way:
အဲ့ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ So what သည် အခုလေးတင် ပြောလိုက်သော အကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည် သင့်အတွက် အရေးမကြီးကြောင်း (သို့) မဆီလျော်ကြောင်း (သို့) စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းကြောင်းဟု သင်ယူဆသောအခါ ပြန်ဖြေရာတွင် အသုံးပြုသော မယဉ်ကျေးသည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သင့်အား တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဝေဖန်နေသည်ဟု ထင်သောအခါတွင် ပိုအသုံးပြုပါသည်။
'You're later than you said you would be.'
'Your new girlfriend seemsalot younger than you.'
မင်းကောင်မလေးက မင်းထက် အတော်ငယ်ပုံပေါက်တယ်
Tell me (ပြောပါဥိး)
You say tell me to introduceaquestion:
ပြောပါဦး tell me ကို မေးခွန်းတစ်စုံတစ်ရာမေးရာတွင် နိဒါန်းပျိုးသည့်အနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပြောပါဦး ရုပ်ရှင်ကို ဘယ်လိုထင်လဲ
Tell me, can you recommendagood, inexpensive restaurant in the town?
ပြောပါဦး။ မြို့ထဲမှာ ဈေးသက်သာပြီး ကောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ညွှန်းပေးနိုင်မလား
Thanks to (ကျေးဇူးကြောင့်)
You say thanks to in this way to mean 'because of':
ကျေးဇူးကြောင့် thanks to သည်“ကြောင့် because ”ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
Thanks to training hard, all the members of the football team are very fit.
ပြင်းထန်စွာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဘောလုံးအသင်းက အသင်းဝင်တိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းနေကြတယ်။
Thanks to Tom's bad behaviour at the party, we were all asked to leave.
ပါတီတုန်းက Tom ရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ အပြုအမူကြောင့် ငါတို့အားလုံးထွက်သွားဖို့အပြောခံခဲ့ရတယ်။
I can't wait (ငါစောင့်ရတာစိတ်မရှည်တော့ဘူး)
You say I can't wait for something when you want it to happen very much and are excited about it:
ငါစောင့်ရတာစိတ်မရှည်တော့ဘူး I can’t wait ကို သင့်အနေဖြင့် ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာကို အရမ်းဖြစ်စေချင်ပြီး ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားနေသော အခါတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
When do you go on holiday?'
ဘယ်တော့ အားလပ်ရက် ခရီးစမလဲ
'Next month and I can't wait!'
I move into my new flat next week. I can't wait!'
နောက်အပတ်ဆိုရင် ငါ့တိုက်ခန်းအသစ်ကို ပြောင်းတော့မှာ ငါစောင့်ရတာစိတ်မရှည်တော့ဘူး
I'm not bothered (ငါက ကိစ္စမရှိဘူး)
You use I'm not bothered in this way to show that something is not important to you and so you do not mind what happens or what is decided:
I’m not bothered (ငါက ကိစ္စမရှိဘူး)ကို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာသည် သင့်အတွက်း အရေးမကြီးသည့်အတွက် ဘာပဲဖြစ်လာလာ (သို့) ဘာပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ် သင့်အနေဖြင့် စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုသည့် အခါတွင် အသုံးပြုသည်။
Would you prefer to eat here or go out forameal?'
ဒီမှာပဲစားမလား? ဒါမှမဟုတ် အပြင်ထွက်စားမလား?
'I'm not bothered. You decide.'
ငါက ကိစ္စမရှိပါဘူး။ မင်း ဆုံးဖြတ်ပါ။
'Would you like to go to the cinema?'
'I'm not bothered, but come with you if you want to go.'
ငါက ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းသွားချင်ရင် ငါလိုက်ပေးမယ်လေ။
Permalink Reply by Thike Htun on July 20, 2012 at 9:12
Permalink Reply by kyaw soe on July 20, 2012 at 9:25
တခါတလေ အာရှသား အချင်းချင်းဆိုပြီး အမှတ်တမဲ့ ပြောခဲ့မိ တာလေးတွေရှိခဲ့တယ်။ သတိပြုရ တော့မှာပါ။ Thanks for your post.
Permalink Reply by sitthurein on July 20, 2012 at 11:57
Thanks for your sharing knowledge & very useful for the social communication.
Permalink Reply by aungkhantbo on July 20, 2012 at 12:35
Permalink Reply by myatsumon on July 20, 2012 at 13:07
Permalink Reply by 0m5pk7lipfqsj on July 20, 2012 at 13:58
Permalink Reply by 0y873s5ve3soe on July 20, 2012 at 15:48
Permalink Reply by 343k7ut1nmxvp on July 20, 2012 at 16:33
Permalink Reply by thet hnin on July 20, 2012 at 16:35
Thanks. It is very helpful for me.
Permalink Reply by Moe Moe Thu on July 20, 2012 at 17:03
Permalink Reply by THAW ZIN on July 20, 2012 at 19:17
thanksalot for your post . It's very help for me .
Permalink Reply by thant zin tun on July 21, 2012 at 1:29